မလေးရှားတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက် ရုတ်တရက် မြင့်တက်။ မလေးရှားနှင့် အိန္ဒိယတို့တွင် တွေ့ရှိရသော တစ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက် တိုးမြင့်ရခြင်း – H2Oupdatenews
မလေးရှားတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက် ရုတ်တရက် မြင့်တက်။ မလေးရှားနှင့် အိန္ဒိယတို့တွင် တွေ့ရှိရသော တစ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက် တိုးမြင့်ရခြင်း
ယမန်နေ့ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ၂၄-နာရီအတွင်း ကိုဗစ်-နိုင်တင်းရောဂါပိုး စွဲကပ်ခြင်းခံရသူ ၁၇၉-ဦးရှိခဲ့ရာ စုစု ပေါင်း ၃,၆၆၂-ဦး- သေဆုံး ၆၁-ဦး ရှိလာသည်။ ၎င်းတို့အနက် ၄၆ – ဦးမှာ ဆီရီပီတာလန်ဂျမာ့ခ်ဗလီတွင် ကျင်းပသည့် တဗ်လိုက် ဘာသာရေးစုရုံးမှုနှင့် ဆက်နွယ်လျှက်ရှိသည်ဟု မလေးရှားအခြေစိုက် The Edeg Market က ယနေ့ရေးသာားသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ – ၂၇ မှ မတ်လ ၁-ရက်နေ့ထိ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသည့် “ ဂျိုရ် “ ခေါ် ဘာသာရေးစုဝေး မှု တွင် စင်္ကာပူနှင့် ဘရူးနိုင်းနိုင်ငံသားများအပါအဝင် “ ဂျမာသ်သား ” ၁၆,၀၀၀ – ဦးကျော် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ မတ်- ၁၅ ရက်နေ့ အထိ မလေးရှားနိုင်ငံတွင်တွေ့ရှိရသည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စွဲကပ်လျှက်ရှိသူ စုစုပေါင်း ၄၂၈-ဦးတွင် ၂၄၃-ဦးမှာ အဆိုပါစုဝေးမှုနှင့်ဆက်နွယ်လျှက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း မလေးရှားအခြေစိုက် Economic Times က ( မတ်-၁၅၊ ၂၀၂၀ နေ့ ) ရေးသားသည်။
ထိုနောက် မတ် ၁၈-ရက်နေ့ မလေးရှားတွင် သွားလာလှုပ်ရှားမှု့ကန့်သတ်ခြင်းအမိန့် ( MCO ) ထုတ်ပြန်ခဲ့ သည်။ ၎င်းရက်တွင် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူ ၆၇၃-ဦး ရှိခဲ့ရာမှာ ယမန်နေ့ ၃-ထောင်အရေအတွက်အထိ ၅-ဆကျော် တိုးလာခြင်းဟု ဆိုရပါမည်။ လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အတွင်း၌ အသစ်ထပ်မံတွေ့ရှိရသူပေါင်း ၁,၁၉၂-ဦးရှိခဲ့၍ သေဆုံးသူ ၂၆-ဦး ရှိကြောင်း တွေ့မြင်ရသည်။ သေဆုံး ၄-ဦးလုံးမှာ အသက် ၅၀ အထက် ရှိသူများဖြစ်နေသည်။
ထို့ကြောင့် လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အတွင်း မလေးရှားတွင် ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရသူတို့၏ ၁.၆၇ % သေဆုံးလျှက်ရှိပြီး၊ နိုင်ငံတကာတွင် ၅.၄% သေဆုံးနေသည်။ ကုသပျောက်ကင်းသူများမှာ ၂၀.၉% ရှိနေသည်ဆို၏။
ဆီရီပီတာလန်ဂျမာ့ခ်ဗလီတွင် ကျင်းပသည့် တဗ်လိုက် ဘာသာရေးစုရုံးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သူ ၁၇,၀၁၂-ဦး လုံးကို ရှရူရာကောင်စီအကူအညီဖြင့် ကောင်းစွာ ခြေရာခံတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း မလေးရှားကျန်းမာရေးအာဏာပိုင် များက ဆိုပါသည်။ ၎င်းတို့အနက် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူ ၁,၅၉၁-ဦးအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး ၁၀,၉၁၂-ဦးတွင် ပိုးမတွေ့ရချေ။ မလေးရှားရှိ ကျန် ၄,၅၀၀ ကျော်မှာ ရလာဒ်အဖြေ စောင့်ဆိုင်းဆဲဖြစ်သည်။ တက်ရောက်ခဲ့ သူများအနက် အနည်းငယ်မှာ အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်သို့ ခရီးထွက်လျှက်ရှိကြသဖြင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိ လာခဲ့လျှင် ရဲတပ်ဖွဲ့၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတို့အကူအညီဖြင့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန် ကျန်ရှိနေသည်။
မလေးရှားကဲ့သို့ ၂၄-နာရီအတွင်း ကူးစက်-သေဆုံးဦးရေ ရုတ်တရက်မြင့်တက်ပြီး တစ်ရက်တည်း လူ ၉,၀၀၀ ခန့် ရောဂါခြေချုပ်ချရသည့် နိုင်ငံမှာ အိန္ဒိယဖြစ်၍ အလားတူပင် ဒေလီမြို့အနီးရှိ “တဗ်လိုက်ဂျမာ့ခ် ” ဋ္ဌာနချုပ် တွင်ကျင်းပသည့် ဘာသာရေးဆုတောင်းပွဲနှင့် ဟောပြောပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သူများးနှင့် ဆက်နွယ်ကြောင်း ဘင်္ဂလားအခြေစိုက် Dhaka Tribune က ( ဧပြီ- ၀၂၊ ၂၀၂၀ ) ရေးသားပါသည်။
အဆိုပါ ဘာသာရေးစုဝေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သူ ဂျမာသ်သား ” ၂,၀၀၀ – ကျော်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ နှင့် ဆက်နွယ်သူ ၉,၀၀၀ ခန့်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
ဒေလီရှိ တဗ်လိုက်အဆောင်ခန်းများတွင်တည်းခိုသော ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့်မလေးရှား အပါအဝင် လူပေါင်း ၂,၃၀ဝ ခန့်ကို ရက်အနည်းငယ်အတွင်း မြို့ရှိ ကွာရန်တင်း စင်တာများသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည်။
အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်နှင့် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်တွင် စုစုပေါင်း လူဦးရေ သန်း- ၁,၇၀၀ ကျော်နေထိုင်လျှက်ရှိရာ ကမ္ဘာ့ လူဦးရေ ၅-ပုံ ၁-ပုံထက် ပိုမိုသည်။ ထိုနိုင်ငံများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစံနစ်နှင့် သိပ်သည်းသော လူနေ ထိုင်မှုပုံစံမှာ ကိုဗစ်-နိုင်တင်းကဲ့သို့ ကူးစက်ရောဂါကျရောက်ခဲ့လျှင် ပျံ့နှံ့မှုထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲပြီး ကြပ်မတ်ကုသ ရန်လည်း မလွယ်ကူကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများက သတိပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ဆီးချိုကဲ့သို့ ကျန်းမာရေးပြဿနာ များလည်း မြင့်မားလျှက်ရှိသည့်အပြင် မြို့ကြီးများအနေအထားနှင့် အိန္ဒိယ၏ လူ့အဖွဲ့အစည်းတည်နေပုံမှာ ဂျပန် နှင့် တရုတ်ကဲ့သို့ တားဆီးကန့်သတ်ရန် မဖြစ်နိုင်ချေ။
(((The Edge Financial Daily., April 06, 2020,” Malaysia’s Covid-19 curve steepening since MCO. By: Emir Zainul” နှင့် Dhaka Tribune., April 02, 2020,” As infection rate steepens in India, experts daunted by prospect of South Asia spread. “ ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျှော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆို၍ ပေါင်းစပ်ဖော်ပြသည်။ )))
Previous Previous post: ကိုဗစ်-နိုင်တင်းသည် ကျောင်းတွင်လုံး၍ အိမ်တွင် ပြားခြင်း
Next Next post: ပင်လယ်ဓါးပြတိုက်သည်တော့ မဟုတ်။ ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့အတွက် မှာယူထားသော မျက်နှာဖုံးများကို အမေရိကန်က ကြားဖြတ်ပင်လယ်ဓါးပြတိုက်သည်ဆိုခြင်းမှာ မမှန်။ သို့သော် မျက်နှာဖုံးများလည်း လက်သည်မပေါ်ပဲ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိ။
Total Visits: 43,740
Total Visitors: 13,445